I-AP 10 -I-HRADEC APARTMENTS "Ngobusuku nje ngokulula"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMichal
I-Apartments Březinova ibekwe kwindawo ezolileyo yeSitalato saseGočárova, iikhilomitha ezili-1 ukusuka kwiziko lembali laseHradec Králové. Inika amagumbi axhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-Wi-Fi yasimahla. IiApartments Březinova zihlaziywa ngokwala maxesha nge-terrace yabucala kunye neendawo zokupaka zabucala. Inika igumbi lokuhlambela elixhotyiswe, indlu yangasese kunye neshawa ye-bidet, ikhitshi ene-hob, umoya oshushu kunye ne-microwave kunye nomatshini wekhofi. Indawo yokuhlalisa ezolileyo kunye ne-TV ye-LED yinto eqhelekileyo.
I-Apartments Březinova ibekwe kwindawo ezolileyo yeSitalato saseGočárova, iikhilomitha ezili-1 ukusuka kwiziko lembali laseHradec Králové. Inika amagumbi axhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-Wi-Fi yasimahla. Amagumbi abekwe kwisakhiwo esisebenzayo ukusuka kwi-1940 kwiziko elibanzi leHradec Králové. Kuye kwalungiswa ngokupheleleyo, kuquka ukwakhiwa kweendawo zokupaka zabucala kubathengi bethu. Iiflethi zeBřezinova zihlaziywa ngoku kunye ne-terrace yangasese, inikezela ngegumbi lokuhlambela elinezixhobo, indlu yangasese ene-bidet shower, ikhitshi ene-hob, umoya oshushu kunye ne-microwave kunye nomatshini wekofu. Indawo yokuhlalisa ezolileyo kunye ne-TV ye-LED yinto eqhelekileyo. Indawo yokupaka yabucala kumagumbi okuhlala iyinxalenye yendawo yokuhlala enesango layo lokungena, elilawulwa kude. Kummandla okufutshane wamagumbi kukho i-OC Aupark, iTesco kunye nemisebenzi emininzi yenkcubeko nemidlalo. Iziko eliyimbali laseHradec Králové likumgama weekhilomitha ezi-1 kwaye lifikeleleka ngokufanelekileyo ngokuhamba okufutshane okanye isithuthi sikawonke-wonke. Indawo yokumisa ibhasi ikwiimitha ezili-100 ukusuka kumagumbi okuhlala, okanye iGreat Square yimizuzu nje eli-10 yokuhamba ukusuka kumbindi wesixeko. Inzuzo enkulu yale ndawo yokuhlala ngumgama wemizuzu emi-5 kuphela yokuhamba ukusuka kuloliwe omkhulu kunye nesikhululo sebhasi.
IMasaryk Square-Burgrárna, iCafe njee
Ndikhetha ukuqhagamshelana ngefowuni, i-sms okanye i-imeyile. Izitshixo ziya kuthatyathwa kusetyenziswa iBhokisi ePhambili, apho uya kufumana ulwazi kunye neekhowudi eziyimfuneko ngosuku ngaphambi kokufika. - Nceda ulandele i-imeyile yakho okanye incoko yangaphakathi-app.
Ndikhetha ukuqhagamshelana ngefowuni, i-sms okanye i-imeyile. Izitshixo ziya kuthatyathwa kusetyenziswa iBhokisi ePhambili, apho uya kufumana ulwazi kunye neekhowudi eziyimfuneko n…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hradec Králové